Home/Special/Ego ole wiil nwere oche nkwagharị nwere?
0 22 Ejiri 2 gụọ
Onye na-akwọ roket na-akwọ ụgbọ mmiri nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ kacha mma isi ebute ndị mmadụ. N'ikwu nke ọzọ, ihe ọghọm ole na ole na-eme nke a, nke metụtara ala e wuru ha. N'ime ụlọ ọrụ ahụ enwere ọtụtụ ndị nrụpụta gụnyere Mack Gbaa ịnyịnya, Intamin Ntụrụndụ agafe, Schwarzkopf (onye nwere ego ugbu a), Zierer, ndị Dutch Vekoma na igwe na-agba mmiri bụ Switzerland Bolliger & Mabillard.
N'isiokwu a, ị nwere ike gụọ nke ọma ole wiil nwere ihe eji agba okirikiri nwere etu ha si arụ ọrụ ọfụma.
Kedu ihe bụ ọrụ nke wiil ndị na-agba okirikiri?
Azịza kachasị mkpa maka ajụjụ a bụ n'ezie: gbaa mbọ hụ na igwe na-apụ apụ n'okporo ụzọ. Onye ọ bụla na-emepụta ihe na-eji ntọala dị iche, mana n'ozuzu ị ga-ahụ ụdị wiil atọ dị iche iche na igwe na-agba agba. Nwere a coaster jee ije, esemokwu n'akụkụ wiil na elu-elu wiil.
De jee ije buru 'nnukwu efere' na gị n'ezie. Na ụlọ ọrụ ha na-akpọkwa tray a 'nchịkwa'. Na esemokwu n'akụkụ wiil ndị ahụ nọdụ n'akụkụ akụkụ nke okporo ụzọ ahụ ma nyere aka mee ka ụgbọ okporo ígwè ahụ dịrị n'etiti etiti. Zọ a ụgbọ okporo ígwè na-anọ na egwu ahụ mgbe a ga-emerịrị ntụgharị.
Ugba ndị na-eme ka ọ dị elu na-ejide n'aka na oche na-adọkpụ n'akụkụ nke ụgbọ ala ahụ na mkpọ ma ọ bụ ihe ọzọ ebe ike ndọda na-adọta ụgbọ oloko. Enwere ike ịchọta wiil ndị a na ala nke okporo ụzọ.
Esemokwu / esemokwu n'akụkụ wiil.
Ugboro ole enwere na onye nchịkwa?
Yabụ na ọtụtụ ndị na-agba okirikiri nwere ụdị atọ nke na-eme ka ụgbọ oloko na-aga. Enwere opekata mpe ụdị abụọ nke wiil dị n'akụkụ ọ bụla. Enwere ike ịchọta eriri nke ọ bụla na ngalaba nkuzi. N'aka aka ekpe, aka ekpe, aka nri na aka ekpe ka inwere ihe ndia.
Ọ bụrụ na anyị were na wiil ọ bụla dị na ya ugboro abụọ n'otu aka, ị ga - enwe wiil isii n'otu nkeji. Yabụ ị ga - ahụ ụkwụ iri abụọ na anọ n’otu onye nkuzi. Iji nwee ike ikwu ugboro ole wiil dị na oche nkwagharị, ịkwesịrị ịma mmadụ ole 'ndị ọzụzụ' ụgbọ oloko nwere. N'ihi na nke a dị iche maka ndị na-agba okirikiri ọ bụla, ọ dịghị mfe ikwu.
Imirikiti ndị na-akpọ roller nwere ndị nkuzi 6 na ụgbọ oloko ahụ, yabụ ị nwere ike ikwu okwu siri ike na ndị na-akpagharị roller nwere ma ọ dịkarịa ala 144 wiil.
esemokwu jee ije ogige ntụrụndụ esemokwu n'akụkụ kwusi wiil
Fọrọ gaa ogige ntụrụndụ ọ bụla dị n'ụwa